Mifety am-pilaminana ? | NewsMada
Mifety am-pilaminana ?
Miangavy mafy ny tsirairay sy ny lafin-kery rehetra ny fitondram-panjakana mba samy hiezaka hisian’ny filaminana mandritra ity fety ity. « Aleo aloha mba hifety am-pilaminana ny vahoaka… », hoy ny Praiminisitra, tao amin’ny fahitalavitra tsy miankina iray, afakomaly. Fa iza moa no tsy mba maniry izany, saingy, hatreto, toa mbola nofinofy ihany. Vao mainka aza mihalalina ny tsy fitoniana rehefa tonga ny fety.
Raha ny hoe vaky trano sy halatra amin’ny endriny samihafa no resahina, ny rehetra efa samy tsy mino ny hahafoana izany tanteraka. Ny fotoan’ny fety toy izao indrindra aza no tena mampirongatra ireny tranga ireny, sady manampy trotraka ny mahatafiditra ny mpitandro filaminana sasany amin’ireny asan-jiolahy ireny. Izany hoe, eo foana ny tsy fitonian-tsaina, mitaky fahamailoana, na andro na alina ary na aiza na aiza aleha.
Raha ny toe-draharaha politika indray, ny vy tsy mikitrana irery. Ny vahoaka anefa, toa efa reraky ny hanoanana, hany ka na inona na inona mankarary azy, tsy hanana aina hifampitarika hitokona na hanao fihetsiketsehana sy fanakorontanana. Raha nisy aza izany, tsy maintsy tao ry zareo mpanao politika.
Tsy mety milamina ihany koa ny any am-paosy sy ny any am-bilanin’ny ankamaroan’ny Malagasy. Nanaporofo izany ny mpivarotra (lamba, akoho amam-borona, enta-madinika, sns), nilaza fa tsy toy ny taloha intsony ny « tsena krismasy ». Mihavitsy hatrany ny mpividy, izany hoe, mihavitsy ny Malagasy manan-katao. Ny vidin’entana rahateo, midangana tao anatin’ny fotoana fohy. Analina ariary avokoa ny kilaon’ny hena, raha tsy hilaza afa-tsy izay fotsiny. Etsy ankilan’ireo, ny volana janoary sy ny maintso ahitra, tsy maintsy tsinjovina.
Eny e, efa iainana isan-taona ireo, saingy antom-pisian’ny fanjakana ny hanala izany karazam-pahasahiranana miteraka tsy filaminana izany. Ny bainga voavadika no porofon’ny asa vita. Matoa mbola mitoetra ireo, tsy nisy ny dingana vita.